Arabia Saodita: feno orana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2010 19:59 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, عربي, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, English
Ity sary mihetsika nalefan'i s123ssa ity ny lalana difotry ny rano sy ireo fiara mitady lalana ao anaty rano, jeren'ny mpitazana mampirisika ireto mpamily mahery fo
Hamodhamad naka sary mihetsika ny orana, sy ny ranobe naterany hitanao eto:
Ity sary mihetsika ity, nalefan'i flv.2, mampiseho ny tanàna difotry ny rano:
Ho an'ny sary mihetsika hafa, jereo eo ambony ny bilaogy .
Saudi Jeans‘ Ahmed Al Omran koa nandefa sary mihetsika mahavariana mampiseho ny hamafin'ny fahavoazana sy ny tondra-drano nateraky ny orambe.
Anisan'ireny ity sary mihetsika ity, nalefan'i sssuuuwww, mampiseho mpianatra voavonjy tao anatin'ny fiarabe fitaterana rendrika':
Avy be ny orana ao an-drenivohitra Riyadh amin'izao fotoana izao, ary tahaka ny ho ratsy ny zava-misy. Araka ny zavatra hitako, dia mitovy amin'ny tondra-drano Jeddah ihany izy ity. Tavela eny amin'ny làlana manodidina ny tanàna ny olona, indrindra fa ny any avaratra sy atsinanana. Tsy azo ampiasaina ny lalana lehibe. olona iray no maty. niantso fanjakana anaty fahamehana ny minisitry ny fiarovam-pirenena sy ny minisitry ny fahasalamana. .Afaka arahanao ara-potoana ao amin'ny twitter ny vaovao, mampiasà ny#riyadhrain. Afaka mampiasa ny RiyadRain.com koa ianao, izay manome vaovao avy amin'ny twitter. Tsaratsara amin'ny mponina ao Riyadh no tsy mivoaka ny trano raha mbola avy be ny orana.